Xisbiga Waddani Waxa Uu Waraaqo U Kala Diray Saaxiibadiisa Soomaaliya Iyo Midawga Yurub Iyagoo Ka Dalbanaya In La Joojiyo Saldhiga Militeri! – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Nasiib darada ina haysata ayaa ah xisbigii talada dalka u tartamayey ee waddani oo indhawaydba lagu xamanayey gacan saar hoose in uu la leeyahay Koonfurta Soomaaliya iyadoo ay hore u soo baxeen cadaymo badan ayaa hadana waxa si badheedha u soo baxay maalmihii u danbeeyey warar hoose oo dhaawac iyo laf jab ku ah qaranka Somaliland kuwaasi uu ku kacay masuul ka tirsan xisbiga Waddani.
Waxan soo xiganayaa qaybo ka mid ah waraaqo uu qoray mid ka mid ah shebekada afka Ingiriiska wax ku qora laguna magacaabo www.change.org kaas oo uu baahiyey xoghayaha Arrimaha dibeda ee xisbiga waddani Dr Maxamed Cismaan Fadal kuna carqaladaynayo arrimaha saldhiga Imaaraadka Carabtu Somaliland ku samaysanayaan ee ay labada golle wada jirka ugu codeeyeen maalinimadii Axada meelna uga soo wada jeesteen 144ka xildhibaane.
Arrintan waxa uu ku socodsiiyey dawladda Soomaaliya iyo Un-ka waxaanu yidhi waxa aanu idinka codsanaynaa inaad joojisaan ood hor istaagtaan idinka oo la hadlaya Imaraadka carabta Saldhiga ay ka wadaan Somaliland arrintaasina ka xisbi ahaan waanu ka soo horjeednaa mana ogolin.
Waxay is waydiin mudan ma masuuliyiinta xisbiga waddani ma cadawga Somaliland ayey u adeegayaan mise daacad ayaanay ka hayn horumarka qarankani ku siqayo, iyagu miyaanay rajo ka lahayn shacbigan ay hagardaamada iyo waxyeelada la garan taagan yihiin marwalba. Sidee ayey doonayaan inay dalkan ku hogaamiyaan ilayn waaba kuwan caadaystay in ay marwalba la hadlaan kuwa neceb horumarka iyo jiritaanka Somalilandbe.
Waxan kula talin lahaa Dr Fadal iyo masuuliyiintiisa uu ugu horeeyo Cirro in ay noqdaan kuwo qarankan u damqada ee aanay noqon kuwo qarankan hagardaameeya sidaasina xil laguma helo ee waxa lagu helaa qaran dumin iyo tafararuq ay la kulmaan shacbigan aan waxba galabsan ee waddani u soo xidhay calanka Orange ka ee aan ku salaysnayn micno sidaasi u sii buuran.
Shacbiga Somalilandna waxan uga digayaa in ay idho dheeraada u yeeshaan kuwa sidaa fadal fariimaha qaldan u diraya cadawgeena hadana xidhan shaadhka muwaadinimada.